Soo -saaraha iyo Warshadda Nidaamka Gaadiidka Gawaarida ee ugu Wanaagsan | GOJON
Habka gaadiidka duubista ee caqliga leh ayaa inta badan mas'uul ka ah gaadiidka iyo maareynta duubabka waraaqaha looga baahan yahay khadka wax -soo -saarka jiingadda. Waxay u qaybsan tahay qaybta gudbinta warqadda, qaybta quudinta duudduubka warqadda, iyo qaybta gaadiidka duudduubka ah iyo qaybta dheecaanka duudduubka. Waxay ka kooban tahay qalabka farsamada gacanta iyo softiweerka xakamaynta, kaas oo runtii garwaaqsada sirdoonka, wax -ku -oolnimada, aad bay waxtar u leedahay in la hagaajiyo xawaaraha guud ee khadadka jiingadaha oo dhan, sidoo kale waxay yaraynaysaa kharashyada shaqada iyo xoojinta.
Nidaamku waa mid horumarsan. Iibsaduhu wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu mas'uul ka ahaado qaybaha hore loo galiyay, dhuumaha, hawo-bixinta, fiilooyinka isgaarsiinta iyo fiilooyinka korontada. Alaab -qeybiyuhu wuxuu mas'uul ka yahay naqshadaynta nidaamka gaadiidka oo dhammaystiran iyo bixinta nidaamka qalabka iyo nidaamka xakamaynta, nidaamyada softiweerka, nidaamyada hawo -mareenka, nidaamyada hydraulic, wax -soo -saarka daboolka godka aasaasiga ah iyo rakibidda hagista iyo tababarka.
Nooca warqadda: duubka jiingadda ah
Ugu badnaan Miisaanka: 3.5ton
Qaab -dhismeedka Guud
Platform Meel lagu quudiyo duubka warqadda ： wuxuu ka kooban yahay madal lagu kaydiyo warqad iyo kala-sooc warqad;
Equipment Qalabka udub-dhexaadka u ah waraaqaha ： wuxuu ka kooban yahay dhululubada kor-u-kaca, boodhadhka bidix iyo midig iyo sanduuqyada;
Tur Wareegga silsiladda guddigu: wuxuu ka kooban yahay wareejiyaha silsiladda warqadda asalka ah, farsamooyinka wareegga iyo jir (iyadoo la isticmaalayo qaab -dhismeed taageero oo wareegsan);
Conve Gudbinta silsiladda guddinta-ku-quudinta: waxay ka kooban tahay silsilado badan oo nooca v-ka ah, farsamaynta gudbinta sprocket-ka iyo jir iyo laambad bidix iyo midig pneumatic ah; silsiladda looxa v-qaabeeya waxay ka kooban tahay saxan v-qaabeeya iyo sita rogid, xagal saxan v-qaabeeya waa 170 digrii, ballacuna waa 250mm;
Terminal Terminalka siideynta duudduuban ee warqadda: wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo ah dhululubyada kor loo qaadayo, laadadka iyo qaansooyinka;
● Hal fure oo ah aaladda quudinta warqadda Gawaarida: khadka wax -soo -saarka waxaa lagu rakibay hoosteeda xaashida, wuxuuna ka kooban yahay bareegaha farsamada gacanta ee labada dhinac;
Hore: Nidaamka Wareejinta Suunka Gawaarida
Xiga: Silsiladda Guddiga
Kaydinta Waraaqda Musqusha Mega Roll
Aaladda Kormeeraha Warqadda Duubista
Kantaroolka Gaadiidka Duubista
Maaraynta duudduubka Rfid Paper
Gawaarida Xamuulka qaada, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, A3 Faylka Waraaqda, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Bangiga Erp, Nidaamka Rullaluudlaha,